Inja yokuqala yokuhlolwa ukuthi inesifo se-coronavirus e-United States ishonile - T mov RELAY
Inja yokuqala yokuhlolwa ukuthi inesifo se-coronavirus e-United States ishonile, kubika umagazini iNational Geographic, ngemuva kokuthola izimpawu ezicishe zifane nezabantu abaningi.
UBuddy, uMelusi waseGerman oneminyaka engu-19 ubudala, wagula ngo-Ephreli, ngaso leso sikhathi umnikazi wakhe uRobert Mahoney yena ngokwakhe eselulama kuCovid-XNUMX, kusho lo magazini kuleli sonto. Wayebonakala enekhala eligayinayo futhi kunzima nokuphefumula, futhi isimo sakhe siqhubeka nokuwohloka emasontweni edlule.
URobert Mahoney nonkosikazi wakhe u-Allison, abahlala eNew York City, ekugcineni banqume ukuketula inja ngoJulayi 11 lapho uBuddy eqala ukuhlanza amahlwili egazi, igazi kumchamo wakhe futhi engakwazi ukuhamba.
Umndeni utshele iNational Geographic ukuthi basola ukuthi unalesi sifo kodwa bekunzima ukukuqinisekisa. "Ngaphandle kwesithunzi sokungabaza, bengicabanga ukuthi (uBuddy) uqinisile", kusho uRobert Mahoney. Kepha bekungagcini nje ukuvalwa kwemithi eminingana endaweni yakhe ngenxa yalesi bhubhane, abanye bebengabaza nokuthi kungenzeka ukuthi isilwane sibambe iCovid-19.
Umtholampilo wagcina ukwazi ukucacisa ukuthi uBuddy ungenwe ngempela, nokuthi esinye isilwane emndenini, umdlwane onezinyanga eziyi-10 ongakaze agule, wayenama-antibodies egciwane.
Odokotela abelapha uBuddy ngokuhamba kwesikhathi bathola ukuthi kungenzeka ukuthi inja leyo nayo yayihlushwa i-lymphoma, okungabonisa ukuthi, njengabantu, izilwane ezinomlando wezokwelapha kungenzeka ukuthi zigule kakhulu yi-coronavirus entsha.
Ngokusemthethweni, ngokwe-World Health Organisation, izilwane ezifuywayo azivame ukudlulisela leli gciwane kubanikazi bazo. Izinja eziyishumi nambili namakati ayi-10 kuhlolwe ukuthi anazo i-coronavirus e-United States, ngokwe-National Geographic.
Le ndatshana iqale ukuvela ku-: https://onvoitout.com/le-premier-chien-teste-positif-au-coronavirus-aux-etats-unis-est-mort/